Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 1 -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 1
Amanqaku, umphezulu nolungelelwaniso. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenzisiweyo kuPhando kunye neMisebenzi yoLuntu
Nguwo kuqala iseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokusingatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokwakha. Yiba yingcali kwi-software kwaye uya kukwazi ukuvelisa umhlaba, ukubala izinto eziphathekayo kunye namaxabiso okwakha, kwaye udale uyilo olukhulu lweendlela, iibhulorho, i-sewers, phakathi kwabanye.
Masikwazise ngeli lizwe le-Autocad Civil3D, esisixhobo esinamandla sokunciphisa ixesha elininzi lokuyila nokubala kunye nokwenza lula umsebenzi wakho kwicandelo lobuchule.
UMNQOPHISO WEKHONDO LISEKELA (1 / 4)
-Inkcazo yokujongana kwesoftware.
-Sishwankathelo kunye noluhlu lwemiyalelo kunye nemisebenzi ephambili.
-Umiselo lweprojekthi ku-Civil3D.
-Ungeniso lweendawo zeendawo zomhlaba kwifayile yokubhaliweyo.
-Ingcaciso yezitayile zamanqaku, izicatshulwa kunye neenkcazo.
-Umiselo, ukuhlela nokulawula iindawo zomhlaba.
- Uyilo kunye nenkcazo yemihlaba yomhlaba weTIN.
-Ingcaciso yezitayile kunye nokubonisa (imigca yethambeka, imephu yesithambiso, imephu yesalathiso, imigangatho yamanzi ashushu).
-Ukuhlela kunye nokumiswa komhlaba.
IZIXHOBO ZOKUGQIBELA KWI-HORIZONTAL
-Ukudalwa nokulungelelaniswa kolungelelwaniso oluvaliweyo (axis tracker).
-Uyilo kunye noqwalaselo lweprofayili yobude bendawo yomhlaba (ulungelelwaniso nkqo).
Uyilo lolungelelaniso nkqo (umgangatho weprojekthi).
Ikhosi kaGoogle Earth - ukusuka ekuqaleni
Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 1